IGoogle Ishisa Imboni yeSEO | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 23, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Ngibhale lokhu okuthunyelwe, I-SEO ifile, emuva ngo-Ephreli. Ngisamile kulokho okuthunyelwe… empeleni, manje kunanini ngaphambili. Inhloso yalokhu okuthunyelwe kwakungekhona ukuhlasela ukwenziwa kwenjini yokusesha njengecebo lokumaketha eliku-inthanethi elisebenzayo, inhloso kwakuwukushayela abathengisi ukuthi basuse ukugxila kwabo emaqhingeni adumile ahambisana nokwenza ngcono izinjini zokusesha kanye nokwenza ngcono imizamo yokuthengisa okuqukethwe.
Kulabo kini abangajwayelene namasu we-SEO, ukwenza isiza kube inhlanganisela yamasu ambalwa:
Ukufaka i uhlelo lokuphatha okuqukethwe lokho kuveza okuqukethwe kwakho kahle ezinjini zokusesha.
Ukuklama yakho isigaba sabaphathi nokuhamba kwemikhumbi ukuze okuqukethwe kwakho kwethulwe ngokulandelana.
Ukubhala nokukhuthaza okuqukethwe okuphoqelela ukugcina okuqukethwe kwesayithi lakho okwakamuva, okuvamile futhi okufanele.
Usebenzisa amagama angukhiye ngempumelelo ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa amagama afanayo angukhiye nemishwana ngaphakathi kokuqukethwe kwakho njengalabo abafuna umkhakha wakho, imikhiqizo noma izinsizakalo.
Ngenkathi izinto zangaphambilini zonke ziqinisekisa ukuthi isiza sakho sisesimweni esihle, ama-ejensi we-SEO athambekele ekweqeni imingcele yawo futhi asebenze ekukhuthazeni okungekho esizeni, kufaka phakathi izikimu zokuxhumanisa, izinsizakalo zemikhombandlela namanethiwekhi wokushicilela… konke ngaphandle kokudalulwa. Ngamanye amazwi… ukuxhuma emuva.
Izinkampani nezinhlangano ezingazimisele ukukopela, ukuxhuma emuva kube yikhanda elikhulu. Umenzeli ojwayelekile umane ayikwazanga ukuncintisana nenkampani etshale imali enkulu ezinhlelweni zokuxhuma emuva nezinhlangano ze-SEO. Kepha imali ehlangene nokuxhumanisa nge-backlink yayiyinhle kakhulu ukudlulela i-ejensi noma iklayenti, ngakho-ke abantu bakhuphukela ebhodini ngemboni engu- $ 5 billion ngokusho Forrester.
I-algorithm yePanda yeGoogle ushintsho luqale impi, kwavela amasayithi ngobusuku obubodwa anwebe kakhulu ukuthola imiphumela eyengeziwe yenjini yokusesha. IGoogle Penguin ibizolandela, ifaka amathonya ezenhlalo amaningi futhi ibuye ibuyele kumasayithi abelungiselelwe ngamagama angukhiye Ngenkathi lokhu kuthuthuka kuthuthukisa ikhwalithi yomphumela wokusesha, bebengakahlaseli inkinga yangempela: ukuxhuma emuva.
I-Google ithumele imilayezo efana nalezi ezinkampanini okungenzeka zifaka phakathi izixhumanisi ezingezona ezemvelo:
Lokhu kutholakala okushaqisayo. Elinye lamakhasimende ethu empeleni lixoshe i-ejensi ye-SEO yangaphambilini lapho bethola ukuthi babuyela emuva. Kepha umonakalo usuwenzile futhi sesihambile isikhathi. Bangabuyela kanjani emuva ngokuzikhandla futhi basuse izixhumanisi? Sibalile ngaphezulu kwenkulungwane ebesele ngemuva… nakumasayithi, amanethiwekhi nezinkomba esingenakho ukufinyelela kuzo! I-Google ikhuluma mhlawumbe ukungeza uhlobo oluthile lwethuluzi le-disavow lapho ungabeka khona ngokuqinile ama-backlink akho ngaphakathi kwama-webmasters.
UMat Cutts, osebenza ngokusezingeni eliphezulu nogaxekile kweGoogle futhi osebenza ezinkundleni zokuxhumana nabasebenzisi babo, usho ukuthi izinkampani kungahle kungadingeki ukuthi aphendule ngokushesha noma usabele kulombiko. Anginasiqiniseko sokuthi lokho kuyicacisile yini inkinga noma kungeze ukudideka okungeziwe… kepha umugqa wangempela ucacile njengosuku. I-Google ekugcineni izimisele ngokudiliza imboni ye-SEO.
Uma i-ejensi yakho ye-SEO iyi ukuxhuma emuva, hhayi ngokugcwele ukudalula lezo zixhumanisi, nokwakha izixhumanisi ezingezona ezemvelo ngokuya ngemigomo ye-Google, udinga ukukhansela leyo nkontileka ngokushesha futhi uze ucele nokuthi balungise umonakalo okungenzeka ukuthi bebewenza. Ubeka inkampani yakho engcupheni.
Tags: umkhakha wezinjini zokuseshaukusebenzisa ngokugcwele injiniseo uyafaimboni ye-seolokho kufile
Jul 26, 2012 ngo-5: 58 PM
Lokhu kuzosho ukuthini kubo bonke abantu njengamanje abangochwepheshe be-SEO?
Jul 27, 2012 ku-2: 32 AM
Into ukuthi bangaki “Ochwepheshe be-SEO” abalungile
Jul 31, 2012 ku-1: 28 AM
@ facebook-100003109495960: disqus ngeshwa, Ochwepheshe abaningi be-SEO bakhawulele ubukhulu bokuqonda kwabo ukuthi ama-algorithms asebenza kanjani nokuthi ungabeka kanjani isiza. Kuzodinga ukuthi bakhe ukuqonda okungcono ngamasu wokumaketha nezenhlalo ukuze baphile. Ngicabanga ukuthi kuzoba kuhle embonini… kepha kuzokhipha izinkampani eziningi!
UGail Monique Mallo
Mar 9, 2013 ku-9: 08 AM
Lokhu kuyiqiniso. Izindinganiso zeGoogle zenze umthetho wegolide wokuthi "okuqukethwe yinkosi" kube yiqiniso kangaka. Banobuhlakani manje futhi bafuna okuqukethwe kwekhwalithi hhayi i-SEO kuphela. Okuyinselele impela, empeleni ngoba manje labo abasemithonjeni yezokuxhumana nabo kumele bafunde ukumaketha.
Jul 27, 2012 ku-2: 43 AM
Okuthunyelwe okuhle UDoug 🙂 Ngemuva kokubona izibuyekezo zakamuva ezivela kwaGoogle nokuthi iGoogle ikhuluma ngokungafihli kanjani ngeSEO ukugwema ukudideka phakathi kwabantu beSEO angicabangi ukuthi “iGoogle ibhoboza imboni yeSEO”. I-Google ifuna ukuhlinzeka ngemiphumela engcono kumsebenzisi. Ngalokho bafuna "abantu abangcono be-SEO". Kuyashintsha. Manje akupheleli ekwenziweni kwama-backlinks ngegama elingukhiye ngqo njengombhalo wehange (Penguin). I-SEO isibe yingxube yezimpawu ezahlukahlukene ezibandakanya ezenhlalo.
Jul 27, 2012 ku-5: 56 AM
I-Seo ayikwazi ukufa, kepha ngokusho kokubuyekezwa okusha i-google yenze izinguquko ezithile ekwakhiweni kwesixhumanisi. I-Google ifike ngesikhathi esifanele ivuselela i-algorithm yayo ukuze isetshenziswe ngokungekho emthethweni ngama-seo ngokwenza amawebhusayithi abe ngcono njalonjalo.
I-Seo manje seyilula ngokwengeziwe ngokuhlanganiswa kwethonya lomphakathi.
Ngo-Apr 16, i-2013 ku-11: 29 AM
Cishe ifile i-seo kepha kuphela labo abangabuyiseli amaqhinga e-Seo, i-black hat seo isifile manje ngoba iPenguni 1, 2, 3 ivuselelwa futhi iguqule igrafu yokusesha ye-google bese izinhlawulo zokufakwa kwePanda zisuse imiphumela yosesho engabonakali ku-google make ifile kepha kunokwabiwa okuningi okungabonwa ngoba iPenguin update 4 iyeza lets ubone ukuthi kuzokwenzekani lapho.
Ngo-Apr 16, i-2013 ku-11: 37 AM
Okuthunyelwe Okuhle! Ngokuqinisekile i-Google iguqula izinto. Umuntu angahambisana kanjani nazo zonke lezi zinguquko?
Ngo-Apr 16, i-2013 ku-12: i-12 PM
Indlela elula ukuyeka ukugxila ku-SEO bese ubeka ukugxila ekubhaleni, ekwabelaneni nasekukhuthazeni okuqukethwe okuhle!
Ngo-Apr 21, i-2013 ku-5: i-56 PM
Lokho kuyiqiniso uDoug! Siyabonga ngempendulo yakho!
Maka @ Benze Bachofoze
Aug 11, 2013 ngo-11: 04 PM
Ngibona izinkampani eziningi ze-seo zizama kabi ukungena ezinkundleni zokuxhumana noma ezinkampanini zokumaketha okuqukethwe ngomzamo wokugcina ibhizinisi labo. Inkinga ukuthi lezo zinhlobo zobuntu ezihluke ngokuphelele namasethi wamakhono engingalindeli nje ukuthi ubuchwepheshe be-seo bube nawo.